လှေကားသုံးထစ်ကျော်ရမည် - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 27, 2015 at 11:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာသူများ၏အနီးကပ်ဆုံးရန်သူတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူက ပြင်ပရန်သူမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဇ္ဇျတ္တအတွင်းမှလာသည်။ စကားလုံးတစ်လုံး၊ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတစ်ခုကို သိသလိုလိုနှင့် သိပြီထင်မှတ်ခြင်း၊ အကယ်၍၄င်းတို့ကို သိထားသည် ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ကို တတ်သွားပြီဟု ထင်တတ်သည့်အကျင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်က ပညာရပ်တစ်ခုအားလေ့လာရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲပြချင်ပါသည်။ ၄င်းလှေကားသုံးထစ်၏အပေါ်ဆုံးသို့ရောက်အောင်လှမ်းမှသာ ၄င်းပညာရပ်ကိုအသုံးချနိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သိ။ knowing about it
“သိ” အဆင့်သည် အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုအား ဘယ်လိုလုပ်သည်ဟု သိထားသော knowing about something ဗဟုသုတ အဆင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- present continuous tense ဆိုလျှင် be + Ving ဟုသိခြင်း, present perfect tense ဆိုလျှင် has/have + Past Participial (မြန်မာကျောင်းသား V3 ဟုအလွယ်သိထားသည့်ကြိယာပုံစံ) ဟုသိခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် လေ့လာသူအများ စုအတွက်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဆင့်တွင် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ၏ အဓိကကျသည့် အစိတ်အပိုင်းအများစုကို ကျောင်းသားများအား သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ပြင်ပအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများတက်ရောက်သည့်အခါ သူတို့သိပြီးသားအကြောင်းအရာများ ပြန်လည်ကျင့်ရသည့်အခါ လိုလိုလားလား လေ့ကျင့်လိုစိတ်မရှိကြ။ မိမိသိထားပြီဖြစ်သည်။ ထပ်လေ့ကျင့်ဖို့မလိုဟုလွဲမှားစွာခံယူတတ်ကြသည်။ stylistic transformation exercise တွေဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင်လုပ်ကာ ဆယ်တန်းအောင်လာခဲ့ကြ သော်လည်း လက်တွေ့တွင် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးသည် Rice is grown in Myanmar.” ဆိုသည့်ဝါကျကို “Rice grows in Myanmer.” “ In Myanmar grows rice.” ကဲ့သို့သော အင်္ဂလိပ်မဆန်သည့်ဝါကျများထွက်လာလေ့ရှိသည်။
မြင်သာသည့်သာဓကဆောင်ရလျှင် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကိုင်ကာ ချက်သူတစ်ယောက်လို ပါဝင်သည့်ဟင်းအမယ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်ဆင့် သိသော်ငြားလည်း တစ်ကယ်ချက်ကြည့်တော့ အရသာရှိသည့်ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်မလာသလိုပင်ဖြစ်သည်။
တတ်။ Being able to do it
“တတ်” အဆင့်သည် ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကိုသိသည့်အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် Being able to do it အဆင့်ဖြစ်သည်။ ပညာရပ်တစ်ခုလေ့လာရာတွင် learning curve ဟုခေါ်သည့် ရင်ဆိုင်ကုန်းတစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၄င်းသည်အခက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ပညာရပ်ကိုလေ့လာကာစလူအများစု လက်မြောက်ကာ တပ်လန်ပြန်လှည့်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၄င်းအဆင့်ကိုကျော်လွှားနိုင်ပါက နောက်ပိုင်းတွင်အရာရာသည် ထင်သလောက်မခက်တော့ဘဲ လေ့လာရန်လွယ်ကူသွားလေ့ရှိသည်။ ပညာရပ်တစ်ခုအားလေ့လာရ လွယ်ကူခြင်း၊ ခက်ခဲခြင်းကို ၄င်း learning curve ၏ steepness လျှောစောက်ဖြင့်နှိုင်းလေ့ရှိသည်။
ဤအဆင့်ကိုရောက်လာသူများသည် “သိပြီးသားကြီး။ ပျင်းစရာကောင်းတယ် ထပ်မလုပ်ချင်ပါဘူး” ဆိုသည့် ခံယူချက်သဘောထားကို စွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။ အထက်က ဟင်းချက်နည်းဥပမာလို ပထမတစ်ခါ စားမရ၊ ဒုတိယတစ်ခါ နည်းနည်းကောင်း၊ တတိယတစ်ခါ မဆိုးပါဘူး၊ စတုတ္ထအခါ လက်ခံနိုင်သည့်အရသာ ဖြစ်လာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် သည်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထပ်ကာထပ်ကာ လုပ်ဆောင်လာသည့်အကျိုးရလာဒ်ကို ခံစားရသူများဖြစ်သည်။
ကျွမ်း။ Being good at doing it
တတိယ“ကျွမ်း”အဆင့်သည့် သာမန်လုပ်တတ်သည့်အဆင့်မှ အရည်အသွေးမီ၊ စံချိန်မီထုတ်ကုန်ကို ဖန်တီးနိုင်သော ပညာရှင်အဆင့်ရောက်ပြီဟုယေဘုယျမှတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယလှေကားထစ်တွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ လေ့ကျင့်မှုမှသာ ၄င်းအဆင့်သို့ရောက်ရန်မျှော်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သာမန်ဟင်းချက်တတ်သူအဆင့်မှ ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချနိုင်သည်အထိ လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုရသွားသူဖြစ်သည်။ ဤတွင် မိမိသိတတ် ထားသည့်ဗဟုသုတများကိုအခြေခံကာ မိမိ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုများပေါင်းထည့်ကာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ထုတ်ကုန်များ တင်ဆက်နိုင်တော့မည်။
ဘာသာစကားသည် အသိပညာလား၊ စွမ်းရည်အစုအဝေး လား Is language knowledge or skill set ?
ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများ၏ကြော်ငြာများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ “English four skills classes” ဆိုသည်ကို မလွတ်တမ်းတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့ထူးခြားသည့်ကြော်ငြာများကတော့ “Five skills သင်ပေးသည်” ဆိုသည်ကိုပင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဘာသာစကားဆိုသည်မှာ “အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ နားထောင်” စွမ်းရည်အစုအဝေးဖြစ်သည်။ ဘောလုံး၊ ရေကူး၊ ဂစ်တာတီး၊ သီချင်းဆို စသည်တို့လို skill ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ “သဘင်သည်လက် ခုနှစ်ရက်” ဟုတင်စားကြသလို လေ့ကျင့်မှုပျက်သွားသည်နှင့် ယုတ်လျော့သွားသည့်အရာမျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် skill ဆိုသည့်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု သည် မပြတ်တမ်းလေ့ကျင့်နေမှ တိုးတက်ကျွမ်းကျင်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဝေါဟာရ၊ အသုံးအနှုန်းလို အသိပညာများကို တိုးပွားစုဆောင်းနေသင့်သည်။
ဘာသာစကားသည် စွမ်းဆောင်မှု skill ဟုနားလည်ပြီဆိုလျှင် လိုလားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ရရှိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသည် အလေ့အကျင့် practice ဟုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုလျှင် အလေ့အကျင့် practice ဆိုသည်ကဘာလဲ။ ခဏလောက်ရပ်စဉ်းစားလိုက်လျှင် practice ဆိုသည်မှာ ထပ်ကာတစ်လဲလဲလုပ်ခြင်း repetition သာဖြစ်သည်ဟုသိလာမည်ဖြစ်သည်။
အလွတ်တည်ကန်ဘော အလွန်ကောင်းသည့် အင်္ဂလန်မှဘောလုံးအကျော်အမော် ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်း သည် ဘောလုံးစ ကစားချိန်မှအနားယူချိန်အထိ ၄င်းကိုအချိန်ရတိုင်း လေ့ကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဂေါက်သီးဘုရင်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့သူ တိုက်ဂါးဝုဒ် သည်လည်း အခြေခံဂေါက်သီးသမားတိုင်းလုပ်နိုင်သည့် drive ကို ယနေ့အထိ လေ့ကျင့်နေဆဲ ဟုဆိုပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်သားများမကြာခဏကြားလေ့ရှိသည့်အဆိုအမိန့်တစ်ခုရှိသည်။ “Practice makes perfect” ဖြစ်သည်။ ပညာရှိတစ်ချို့က ၄င်းကို “Perfect practice makes perfect” ဟုထပ်ဖြည့်ကြသည်။ လေ့ကျင့်သည်ဆိုရာတွင်လည်း နည်းလမ်းတစ်ကျမဟုတ်ပါက အချည်းအနှီးဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် လှေကားသုံးထစ်ကျော်နိုင်ရန် တိကျပြတ်သားသည့် ပန်းတိုင်တစ်ခုထားရမည်။ စံနစ်တစ်ခုတော့ဖြင့်လိုသည်။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတော့လိုသည်။ ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ရာတွင်လည်း ရေရှည်ပန်းတိုင်long-term objective နှင့် ရေတိုပန်းတိုင် short-term objective တို့ကိုခွဲခြားထားသင့်သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုဂုရုကြီး Peter Drucker ကအစပြုထင်ရှားလာခဲ့သည့် MBO ခေါ် management by objective ဟုခေါ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတစ်မျိုးသည် စီမံခန့်ခွဲရေးလောကတွင်သိထားကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးမျှရှိပြီဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများ၊ ပညာရပ်တစ်ခုခုကိုလေ့လာသူများ အတွက်မူ ၄င်းသည် မှီငြမ်းအသုံးချနိုင်စရာနည်းစံနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လျှင် SMART ဟုခေါ်သည့်စံနစ်တစ်ခုရမည်ဖြစ်သည်။
(ဝေါဟာရပိုင်းလား၊ သဒ္ဒါပိုင်းလား၊ စွမ်းရည်လေးမျိုးလား၊ မည်သည့် level အထိတိုးတက်စေမည်)
(မိမိတိုးတက်လာမှုကို တိုင်းတာရန်စံနှုန်းတစ်ခုဖြင့်တိုင်းတာ နိုင်ရမည်။ ဥပမာ achievement test, proficiency test တစ်ခုခုနှင့်စစ်ကြည့်၍ထွက်လာသည့် ရလဒ်သိနိုင်ရမည်။ )
(မိမိလက်ရှိအဆင့်နှင့် ပန်းတိုင်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ အခြေခံအဆင့် စာသင်သားက “သုံးလအတွင်း Times မဂ္ဂဇင်းဖတ်နိုင်ရမည်” ဆိုသည်မှာ achievable ရယူဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသည့် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။)
(နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်သွားမည့်သူက Academic English နှင့်ဆိုင်သည်ကို ဦးစားပေးလေ့လာ သင့်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်မည့်သူက English for Professional Purpose သို့မဟုတ် English for Occupational Purpose တို့ကို focus ထားလေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ဘဲအဆီအငေါ်မတည့်ပါက အချိန်ဖြုန်းသလိုပင်ဖြစ်မည်။)
(မိမိပန်းတိုင်မှာ ၃-၄ လ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်နိုင်သလို နှစ်ချီကြာသည့် ရေရှည်ပန်းတိုင်လည်းဖြစ်နိုင် သည်။ သို့ရာတွင် “မည်သည့်ကာလတွင် မည်သည့်အရာ လုပ်နိုင်ရမည်” ဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက်မရှိ မဖြစ် ပါရမည်။
မိတ်ဆွေ၏အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်တစ်ခု အခုပဲ SMART system သုံးပြီးချမှတ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
သိခြင်းသည် တတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တတ်ခြင်းသည် ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နားလည်လာသည့်တစ်နေ့ professional လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးတင်ပြလိုက်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (There again/Let's face it/Q...
အသံကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း (Use Your Voice Effectively by Guy ...
အင်ျဂလိပျစကားလလေ့ာသူမြား၏အနီးကပျဆုံးရနျသူတဈယောကျရှိသညျ။ သူက ပွငျပရနျသူမဟုတျ။ ကြှနျုပျတို့အဇ်ဇတ်ြတအတှငျးမှလာသညျ။ စကားလုံးတဈလုံး၊ သဒ်ဒါစညျးမဉျြးတဈခုကို သိသလိုလိုနှငျ့ သိပွီထငျမှတျခွငျး၊ အကယျ၍၎င်းငျးတို့ကို သိထားသညျ ဆိုလြှငျ မိမိကိုယျကို တတျသှားပွီဟု ထငျတတျသညျ့အကငျြ့ပငျဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောက ပညာရပျတဈခုအားလလေ့ာရာတှငျ အခွခေံအားဖွငျ့ အဆငျ့သုံးဆငျ့ခှဲပွခငျြပါသညျ။ ၎င်းငျးလှကေားသုံးထဈ၏အပျေါဆုံးသို့ရောကျအောငျလှမျးမှသာ ၎င်းငျးပညာရပျကိုအသုံးခနြိုငျသူ တဈယောကျဖွဈပါလိမျ့မညျ။
“သိ” အဆငျ့သညျ အခွခေံအကဆြုံးအဆငျ့ဖွဈသညျ။ တဈခုခုအား ဘယျလိုလုပျသညျဟု သိထားသော knowing about something ဗဟုသုတ အဆငျ့ဖွဈသညျ။ ဥပမာ- present continuous tense ဆိုလြှငျ be + Ving ဟုသိခွငျး, present perfect tense ဆိုလြှငျ has/have + Past Participial (မွနျမာကြောငျးသား V3 ဟုအလှယျသိထားသညျ့ကွိယာပုံစံ) ဟုသိခွငျးမြိုးဖွဈသညျ။ ဤအဆငျ့သညျ လလေ့ာသူအမြား စုအတှကျအဓိကအတားအဆီးဖွဈသညျ။ တက်ကသိုလျဝငျတနျးအဆငျ့တှငျ အင်ျဂလိပျသဒ်ဒါ၏ အဓိကကသြညျ့ အစိတျအပိုငျးအမြားစုကို ကြောငျးသားမြားအား သငျကွားပေးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူတို့သညျ ပွငျပအင်ျဂလိပျစာသငျတနျးမြားတကျရောကျသညျ့အခါ သူတို့သိပွီးသားအကွောငျးအရာမြား ပွနျလညျကငျြ့ရသညျ့အခါ လိုလိုလားလား လကေ့ငျြ့လိုစိတျမရှိကွ။ မိမိသိထားပွီဖွဈသညျ။ ထပျလကေ့ငျြ့ဖို့မလိုဟုလှဲမှားစှာခံယူတတျကွသညျ။ stylistic transformation exercise တှဖှေတျဖှတျကအြေောငျလုပျကာ ဆယျတနျးအောငျလာခဲ့ကွ သျောလညျး လကျတှတှေ့ငျ “မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆနျစပါးစိုကျပြိုးသညျ Rice is grown in Myanmar.” ဆိုသညျ့ဝါကကြို “Rice grows in Myanmer.” “ In Myanmar grows rice.” ကဲ့သို့သော အင်ျဂလိပျမဆနျသညျ့ဝါကမြားထှကျလာလရှေိ့သညျ။
မွငျသာသညျ့သာဓကဆောငျရလြှငျ ဟငျးခကျြနညျးစာအုပျကိုငျကာ ခကျြသူတဈယောကျလို ပါဝငျသညျ့ဟငျးအမယျနှငျ့ လုပျဆောငျရမညျ့အဆငျ့ဆငျ့ သိသျောငွားလညျး တဈကယျခကျြကွညျ့တော့ အရသာရှိသညျ့ဟငျးတဈခှကျ ဖွဈမလာသလိုပငျဖွဈသညျ။
တတျ။ Being able to do it
“တတျ” အဆငျ့သညျ ဘယျလိုလုပျသလဲဆိုတာကိုသိသညျ့အပွငျ မိမိကိုယျတိုငျလကျတှလေု့ပျကိုငျနိုငျသညျ့ Being able to do it အဆငျ့ဖွဈသညျ။ ပညာရပျတဈခုလလေ့ာရာတှငျ learning curve ဟုချေါသညျ့ ရငျဆိုငျကုနျးတဈခုရှိသညျဟုဆိုကွသညျ။ ၎င်းငျးသညျအခကျဆုံးအပိုငျးဖွဈသညျ။ ပညာရပျကိုလလေ့ာကာစလူအမြားစု လကျမွောကျကာ တပျလနျပွနျလှညျ့သညျ့နရောဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးအဆငျ့ကိုကြျောလှားနိုငျပါက နောကျပိုငျးတှငျအရာရာသညျ ထငျသလောကျမခကျတော့ဘဲ လလေ့ာရနျလှယျကူသှားလရှေိ့သညျ။ ပညာရပျတဈခုအားလလေ့ာရ လှယျကူခွငျး၊ ခကျခဲခွငျးကို ၎င်းငျး learning curve ၏ steepness လြှောစောကျဖွငျ့နှိုငျးလရှေိ့သညျ။
ဤအဆငျ့ကိုရောကျလာသူမြားသညျ “သိပွီးသားကွီး။ ပငျြးစရာကောငျးတယျ ထပျမလုပျခငျြပါဘူး” ဆိုသညျ့ ခံယူခကျြသဘောထားကို စှနျ့လှတျနိုငျခဲ့သူမြားဖွဈသညျ။ အထကျက ဟငျးခကျြနညျးဥပမာလို ပထမတဈခါ စားမရ၊ ဒုတိယတဈခါ နညျးနညျးကောငျး၊ တတိယတဈခါ မဆိုးပါဘူး၊ စတုတ်ထအခါ လကျခံနိုငျသညျ့အရသာ ဖွဈလာသညျအထိ စိတျရှညျရှညျနှငျ့ သညျတဈမြိုးတညျးကိုပဲ ထပျကာထပျကာ လုပျဆောငျလာသညျ့အကြိုးရလာဒျကို ခံစားရသူမြားဖွဈသညျ။
ကြှမျး။ Being good at doing it
တတိယ“ကြှမျး”အဆငျ့သညျ့ သာမနျလုပျတတျသညျ့အဆငျ့မှ အရညျအသှေးမီ၊ စံခြိနျမီထုတျကုနျကို ဖနျတီးနိုငျသော ပညာရှငျအဆငျ့ရောကျပွီဟုယဘေုယမြှတျယူနိုငျပွီဖွဈသညျ။ ဒုတိယလှကေားထဈတှငျ ကွိမျဖနျမြားစှာ ထပျခါတဈလဲလဲ လကေ့ငျြ့မှုမှသာ ၎င်းငျးအဆငျ့သို့ရောကျရနျမြှျောမှနျးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ သာမနျဟငျးခကျြတတျသူအဆငျ့မှ ဆိုငျဖှငျ့ရောငျးခနြိုငျသညျအထိ လိုအပျသညျ့ကြှမျးကငျြမှုရသှားသူဖွဈသညျ။ ဤတှငျ မိမိသိတတျ ထားသညျ့ဗဟုသုတမြားကိုအခွခေံကာ မိမိ၏တီထှငျဖနျတီးမှုမြားပေါငျးထညျ့ကာ အရညျအသှေးကောငျးမှနျသညျ့ထုတျကုနျမြား တငျဆကျနိုငျတော့မညျ။
ဘာသာစကားသညျ အသိပညာလား၊ စှမျးရညျအစုအဝေး လား Is language knowledge or skill set ?
ဘာသာစကားသငျတနျးကြောငျးမြား၏ကွျောငွာမြားကိုလလေ့ာကွညျ့ပါ။ “English four skills classes” ဆိုသညျကို မလှတျတမျးတှရေ့ပါလိမျ့မညျ။ တဈခြို့ထူးခွားသညျ့ကွျောငွာမြားကတော့ “Five skills သငျပေးသညျ” ဆိုသညျကိုပငျတှနေို့ငျပါလိမျ့မညျ။ ဟုတျပါသညျ။ ဘာသာစကားဆိုသညျမှာ “အရေး၊ အဖတျ၊ အပွော၊ နားထောငျ” စှမျးရညျအစုအဝေးဖွဈသညျ။ ဘောလုံး၊ ရကေူး၊ ဂဈတာတီး၊ သီခငျြးဆို စသညျတို့လို skill ကြှမျးကငျြမှုတဈရပျဖွဈသညျ။ “သဘငျသညျလကျ ခုနှဈရကျ” ဟုတငျစားကွသလို လကေ့ငျြ့မှုပကျြသှားသညျနှငျ့ ယုတျလြော့သှားသညျ့အရာမြိုးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ skill ဆိုသညျ့စှမျးဆောငျနိုငျစှမျး၊ ကြှမျးကငျြမှု သညျ မပွတျတမျးလကေ့ငျြ့နမှေ တိုးတကျကြှမျးကငျြလာနိုငျသညျ။ အခွားတဈဖကျတှငျလညျး ဝေါဟာရ၊ အသုံးအနှုနျးလို အသိပညာမြားကို တိုးပှားစုဆောငျးနသေငျ့သညျ။
ဘာသာစကားသညျ စှမျးဆောငျမှု skill ဟုနားလညျပွီဆိုလြှငျ လိုလားသညျ့ကြှမျးကငျြမှုစှမျးရညျရရှိရနျ တဈခုတညျးသောနညျးလမျးသညျ အလအေ့ကငျြ့ practice ဟုနားလညျနိုငျမညျဖွဈသညျ။ ဒါဆိုလြှငျ အလအေ့ကငျြ့ practice ဆိုသညျကဘာလဲ။ ခဏလောကျရပျစဉျးစားလိုကျလြှငျ practice ဆိုသညျမှာ ထပျကာတဈလဲလဲလုပျခွငျး repetition သာဖွဈသညျဟုသိလာမညျဖွဈသညျ။
အလှတျတညျကနျဘော အလှနျကောငျးသညျ့ အင်ျဂလနျမှဘောလုံးအကြျောအမျော ဒေးဗဈဘကျဟမျး သညျ ဘောလုံးစ ကစားခြိနျမှအနားယူခြိနျအထိ ၎င်းငျးကိုအခြိနျရတိုငျး လကေ့ငျြ့ခဲ့သညျဟုဆိုသညျ။ ထို့အတူ ကမ်ဘာ့နံပါတျတဈ ဂေါကျသီးဘုရငျအဖွဈ နှဈပေါငျးမြားစှာရပျတညျခဲ့သူ တိုကျဂါးဝုဒျ သညျလညျး အခွခေံဂေါကျသီးသမားတိုငျးလုပျနိုငျသညျ့ drive ကို ယနအေ့ထိ လကေ့ငျြ့နဆေဲ ဟုဆိုပါသညျ။
အင်ျဂလိပျစာသငျသားမြားမကွာခဏကွားလရှေိ့သညျ့အဆိုအမိနျ့တဈခုရှိသညျ။ “Practice makes perfect” ဖွဈသညျ။ ပညာရှိတဈခြို့က ၎င်းငျးကို “Perfect practice makes perfect” ဟုထပျဖွညျ့ကွသညျ။ လကေ့ငျြ့သညျဆိုရာတှငျလညျး နညျးလမျးတဈကမြဟုတျပါက အခညျြးအနှီးဖွဈတတျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လှကေားသုံးထဈကြျောနိုငျရနျ တိကပြွတျသားသညျ့ ပနျးတိုငျတဈခုထားရမညျ။ စံနဈတဈခုတော့ဖွငျ့လိုသညျ။ ရညျမှနျးခကျြတဈခုတော့လိုသညျ။ ရညျမှနျးခကျြခမြှတျရာတှငျလညျး ရရှေညျပနျးတိုငျlong-term objective နှငျ့ ရတေိုပနျးတိုငျ short-term objective တို့ကိုခှဲခွားထားသငျ့သညျ။
စီမံခနျ့ခှဲမှုဂုရုကွီး Peter Drucker ကအစပွုထငျရှားလာခဲ့သညျ့ MBO ချေါ management by objective ဟုချေါသညျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုပုံစံတဈမြိုးသညျ စီမံခနျ့ခှဲရေးလောကတှငျသိထားကွသညျမှာ နှဈပေါငျး ၅၀ နီးပါးမြှရှိပွီဖွဈသညျ။ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာသူမြား၊ ပညာရပျတဈခုခုကိုလလေ့ာသူမြား အတှကျမူ ၎င်းငျးသညျ မှီငွမျးအသုံးခနြိုငျစရာနညျးစံနဈတဈခုဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးကိုအနှဈခြုပျလိုကျလြှငျ SMART ဟုချေါသညျ့စံနဈတဈခုရမညျဖွဈသညျ။
(ဝေါဟာရပိုငျးလား၊ သဒ်ဒါပိုငျးလား၊ စှမျးရညျလေးမြိုးလား၊ မညျသညျ့ level အထိတိုးတကျစမေညျ)
(မိမိတိုးတကျလာမှုကို တိုငျးတာရနျစံနှုနျးတဈခုဖွငျ့တိုငျးတာ နိုငျရမညျ။ ဥပမာ achievement test, proficiency test တဈခုခုနှငျ့စဈကွညျ့၍ထှကျလာသညျ့ ရလဒျသိနိုငျရမညျ။ )
(မိမိလကျရှိအဆငျ့နှငျ့ ပနျးတိုငျမှာ အဓိပ်ပါယျရှိသညျ့သတျမှတျခကျြဖွဈသငျ့သညျ။ အခွခေံအဆငျ့ စာသငျသားက “သုံးလအတှငျး Times မဂ်ဂဇငျးဖတျနိုငျရမညျ” ဆိုသညျမှာ achievable ရယူဖို့ဖွဈနိုငျခွမေရှိသညျ့ ပနျးတိုငျဖွဈသညျ။)
(နိုငျငံခွားတှငျပညာသငျသှားမညျ့သူက Academic English နှငျ့ဆိုငျသညျကို ဦးစားပေးလလေ့ာ သငျ့ပွီး အလုပျသှားလုပျမညျ့သူက English for Professional Purpose သို့မဟုတျ English for Occupational Purpose တို့ကို focus ထားလကေ့ငျြ့ရမညျဖွဈသညျ။ သို့မဟုတျဘဲအဆီအငျေါမတညျ့ပါက အခြိနျဖွုနျးသလိုပငျဖွဈမညျ။)
(မိမိပနျးတိုငျမှာ ၃-၄ လ ရတေိုပနျးတိုငျဖွဈနိုငျသလို နှဈခြီကွာသညျ့ ရရှေညျပနျးတိုငျလညျးဖွဈနိုငျ သညျ။ သို့ရာတှငျ “မညျသညျ့ကာလတှငျ မညျသညျ့အရာ လုပျနိုငျရမညျ” ဆိုသညျ့ ကနျ့သတျခကျြမရှိ မဖွဈ ပါရမညျ။
မိတျဆှေ၏အင်ျဂလိပျစာတိုးတကျရေးပနျးတိုငျတဈခု အခုပဲ SMART system သုံးပွီးခမြှတျလုပျဆောငျကွညျ့ပါ။
သိခွငျးသညျ တတျခွငျးမဟုတျကွောငျး၊ တတျခွငျးသညျ ကြှမျးခွငျးမဟုတျကွောငျး နားလညျလာသညျ့တဈနေ့ professional လမျးကွောငျးပျေါသို့ ရောကျလာလိမျ့မညျဖွဈကွောငျး သတိပေးတငျပွလိုကျပါသညျ။
အသုံးဝငျသော အင်ျဂလိပျစကားအသုံးအနှုနျးမြား (There again/Let's face it/Quite frankly/I hope so)
Giving Directions (လမျးညှနျပေးခွငျး)
အသံကို ထိရောကျစှာ အသုံးပွုခွငျး (Use Your Voice Effectively by Guy Perring)
Permalink Reply by Tun Lwin on January 28, 2015 at 19:14
Let me share Sayar ...
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on January 28, 2015 at 22:26
please do, Ko Tun Lwin.
Permalink Reply by Aung Kyaw Myint on February 3, 2015 at 18:04
Permalink Reply by ဇွန်ဇွန် on February 4, 2015 at 11:36
I've been learning English till now.But now I know how to measure my English Skill and get my target as soon as possible .
Permalink Reply by Niniwin Shein on February 6, 2015 at 17:39
Kindly teach us.Thanks.
Permalink Reply by Zwe Marn Hein on February 10, 2015 at 15:14
Permalink Reply by minhantun on February 13, 2015 at 11:26
Permalink Reply by htaylim on March 26, 2016 at 16:25